के कारणले पर्छ कपालमा चाया ? छुट्कारा कसरी पाउने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ टिप्स ∕ के कारणले पर्छ कपालमा चाया ? छुट्कारा कसरी पाउने ?
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७८ कात्तिक ३ गते, १३:१० मा प्रकाशित
कपालमा चाया पर्नु एक आम समस्या हो। यसको कारण खराब जीवनशैली र बदलिदो मौसम हुन सक्छ। चायाले टाउकोमा मात्र असर गर्दैन, यसको कारणले गर्दा अन्य धेरै समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक चायाँ बढ्दै गएपछि कपाल चिलाउने, झर्न सुरु हुन्छ। यसको उपचार प्राकृतिक रुपबाट पनि गर्न सकिन्छ।
टाउकोमा तेल आउने हुँदा टाउकोको छालामा चिल्लो हुन्छ र फोहोर जम्मा हुन्छ र जसले चाया देखिन्छ। त्यस्तै, धुवाधुलो, फोहोर र कपालमा आएको चिल्लोपन, उचित आहारको कमीको कारण पनि यो समस्या देखिन्छ।
चाया रोग भनेको फंगल्सका कारण लाग्ने रोग भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो चिल्ल्लोपना बढी भएको ठाउँमा फस्टाउने गर्दछ ।
यसबाट कसरी पाउने छुटकारा ?
घ्युकुमारी कपालको स्वास्थ्यको लागी धेरै फाइदाजनक छ। यसले कपाललाई चिसोपन दिन्छ। यसमा एन्टीफंगल-एन्टीब्याक्टेरियल गुण हुन्छ जसले कपालको चाया हटाउन मद्दत गर्छ। फ्रेस जेल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो लगाएपछि ३० मिनेटसम्म छाड्नु होस्। त्यसपछि कुनै औषधीय एन्टी-ड्यान्डर्फ स्याम्पुले धुनुहोस।
बेकिंग सोडा ड्यान्ड्रफको लागी स्क्रबको रूपमा कार्य गर्दछ। यो बिस्तारै मृत छालाको कोषिकालाई हटाएर ‘Exfoliates’ गर्छ। बेकिंग सोडा सिधै भिजेको कपालमा लगाउने गर्नुहोस र यसलाई तपाइँको टाउको मा मालिश गर्नुहोस्। यसलाई एक वा दुई मिनेटको लागी छोड्नुहोस्, त्यसपछि एक हल्का शैम्पू संग आफ्नो कपाल धुनुहोस्।
नरिवलको तेलमा पाइने एन्टिअक्सिडेन्टले ड्यान्ड्रफको समस्या हटाउन सक्छ। नरिवलको तेलले टाउकोको हाइड्रेशन सुधार गर्न र सुख्खापन रोक्न मद्दत गर्न सक्छ । नारिवल तेल पनि एक्जिमाको उपचारमा मद्दत गर्न सक्छ।
यसैगरी अत्याधिक धुलो—धुवाँ भएको वातावरणबाट जोगिनु पर्दछ । यदि त्यस्तो वातावरणमा हिड्नै पर्ने भए हामीले आफ्नो टाउको तथा शरीर पूरा ढाकिने कपडा लगाउनु पर्दछ । हामीले आफ्नो सरसफाइमा विशेष ध्यान दिई दैनिक नुहाउनाले पनि चायाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
हेल्थ एण्ड ब्युटी प्रडक्टमा हिमालयन इसेन्सको इन्ट्री, ८ करोड लगानी…